Nagu saabsan - Shenzhen Yurucheng Qalabka Ilkaha CO., LTD
Waxay ku taallaa aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Shenzhen, Shenzhen Yurucheng Dental Material CO., LTD waa shirkad dhammaystiran oo ku takhasustay horumarinta, soo -saarka iyo suuq -geynta Ilkaha Zirconia Ceramic Block.
Yurucheng Cherish mabaadi'da hal-abuurka teknolojiyadda iyo dadka ku jihaysan, oo xoogga saaraya R&D, nafteeda u huray si ay u siiso xirfadlayaal, tayo wanaagsan iyo badeecad badbaado u leh bukaannada afka.
YUCERA waxay leedahay koox farsamo oo xoog leh, 60% xubnihiisu waa khubaro bayoolaji xirfadeed sare iyo khubaro CNC oo caqli badan. Sidoo kale, YUCERA waxay la shaqaysaa machadyo badan oo caan ah oo Shiine ah si loo soo bandhigo tikniyoolajiyad wax soo saar oo horumarsan gudaha iyo dibaddaba.
Yurucheng waxay iskaashi la samaysaa xarun badan oo ka shaqaynta ilkaha iyo cusbitaallada afka, waxay kasbadaan waxqabad aad u wanaagsan oo duurka ku jira waxayna kasbadaan farsamo yaqaanno iyo bukaanno sumcad wanaagsan leh.
Badeecadaheena ugu weyni waa dhoobada ilkaha dhoobada zirconia dhoobada, oo u dhiganta qalabka CAD/CAM, qalabka daabacaadda 3D iyo waxyaabaha kale ee ilkaha ee la xiriira. Bixiyaha alaabada afka ee xirfadda leh, waxaan ku siin karnaa agabyada ilkaha ee dhijitaalka ah, qalabka ilkaha, iyo badeecooyin iyo adeegyo dijitaal ah oo dhammaystiran.
Horumarinta Suuqyada Caalamka, waxaa naga go'an inaan ku hormarno sumcad aad u wanaagsan oo ah alaabta ilkaha dhijitaalka ah ee alaabta ilkaha.
Horumarkayagu wuxuu ka yimid baadi -goob aan daalin iyo hal -abuur aan kala joogsi lahayn.
1. Yucera waxay iskaashi la samaysaa xarun badan oo ka shaqaysa ilkaha ilkaha iyo isbitaallada afka ah, waxay kasbataa waxqabad aad u wanaagsan xagga duurka waxayna kasbataa farsamo yaqaanno iyo bukaanno qaddar sumcad wanaagsan leh.
2. Waxaan mar hore ka gudubnay shahaadada CE iyo ISO.
Waan hubaa in warshadeena ay ku filan tahay barnaamijkaaga suuqaaga.
Ku soo dhawow wixii faallo ah.
Tababarku waa koorso aasaasi u ah dhammaan xubnaha waxaanna qabanqaabin doonnaa tababarro kala duwan si ay nooga caawiyaan sidii aan u hagaajin lahayn kartideena oo Aan helno quruxda nolosha. Waxaan qadarineynaa waqtiga aan wax wada baraneyno oo wax wada baraneyno.
101-201, Dhismaha 4, No.1 Laanta Zhongcheng Life Science Park, No. 14, Zhongxing Road, Beesha Xiuxin, Xafiiska Wadada Kengzi, Degmada Pingshan, Shenzhen, Shiinaha.
Marka loo eego baahiyahaaga, adiga kuu habee, oo ku siiya alaabo aad u qiimo badan.